3d Marble Xardho, Safka Marmarka, Qaabka Marmarka - Morningstar
waxaa had iyo jeer lagu siin doonaa qiimaha dhabta ah ee dhagaxyada dabiiciga ah
Quruxda dhagaxa dabiiciga ahi had iyo jeer waxay sii deyneysaa bilicdiisa iyo soo jiidashadeeda
Aruurinta Dhagax Dabiiciga ah
Sida aan wada ogsoonahay, marmarku waa shey fiican oo darajo ah.Sidaa darteed qoysas badan ayaa u adeegsada marmar qurxinteeda, marmartuna waxay leedahay marmar dabiici ah iyo marmar faux ah.Way aad u badan yihiin. Iyo hadday tahay marmar macmal ah ama natu ...
29 Diisambar, 2020
Dad aad iyo aad u tiro badan ayaa doorta inay isticmaalaan miisaska marmar sababa la xiriira muuqaalkiisa quruxda badan iyo astaamo badan oo aad u fiican. Marka ugu horeysa, adkaanta sare Ma fududa in cilladaha laga helo.
15 Diisambar, 2020
Adeegsiga qalabka bannaan ayaa si joogto ah u soo saaraysa wax cusub, qalab kala duwan oo dhisme ah ayaa si tartiib tartiib ah u soo galay aragtidayada. Soojiidashada marmar ayaan hoos u dhicin tan iyo wakhtiyadii hore. Marmar o ...
09 Diisambar, 2020
Xiamen Morningstar Stone Co., LTD waxaa la aasaasay bishii Nofeembar 23, 2017 waxaana laga diiwaangeliyey Xiamen, oo ah magaalo jasiirad qurux badan leh, oo inta badan ku hawlan dhammaan noocyada kala duwan ee marmarka casriga ah, granite, tiirarka gaarka u qaabaysan, iwm.
24 Sebtember, 2019
Su'aal ma qabtaa
Halkan waad nala soo xiriiri kartaa oo waxaan heysanaa qof si dhakhso ah kuugu soo warrama!